Izindaba - nsw-api-600-gate-valve-packing
Ukulondolozwa nokufakwa esikhundleni se-API 600 Valve Packing Valve packing
Isitoreji indlela valve nokupakisha:
Izinto ezigcwaliswa yile phrojekthi ikakhulu ziqukethe izinto ezimbili ezilandelayo: i-PTFE ne-graphite ethambile.
Lapho igcinwa, ivalwa esikhwameni noma ebhokisini. Gcina kahle endaweni yokugcina izinto eyomile nenomoya, gwema ukukhanya kwelanga. Nakekela ukungena komoya ngesikhathi sokulondolozwa kwesikhathi eside, futhi ulawule izinga lokushisa kwephoyinti lokugcina ukuthi lingadluli u-50 ° C ukuvimbela uthuli olweqile. Uma uthuli olunamathele ebusweni bokugcwalisa lususiwe futhi lusetshenzisiwe, lisule ngendwangu ehlanzekile.
Valve ukupakisha esikhundleni indlela:
Izimpawu zokupakisha zakhiwe ngale ndlela elandelayo: 1). Ukupakisha ukuminyaniswa kwenati, i-2) i-Swing bolt, i-3) i-pin elungisiwe, i-4) Ukupakisha, i-5) i-sleeve yokupakisha, i-6) Ipuleti yengcindezi yokupakisha (kwesinye isikhathi i-5 ne-6 ziyizinto ezihlanganisiwe ngokusho kwesikhunta futhi kunqunywa izimo zokusebenza ezahlukahlukene, umsebenzi jikelele kuyefana nokwahlukana)
Izinyathelo zokufaka uphawu lokupakisha zimi kanje:
1. Sebenzisa isikrufu ukususa i-1) i-compression compression nut bese uyiphakamisa u-5) umkhono wokucindezela ukupakisha no-6) ipuleti lokucindezela ukupakisha, kushiye isikhala sokusebenza kokufaka okunye ukupakisha.
2. Sebenzisa i-flat-blade screwdriver noma ezinye izingcezu zensimbi ezisuswayo ukususa ukupakisha kwasekuqaleni bese ukufaka okusha. Uma ukupakisha kusetshenziswa, lapho ufaka ukupakisha okusha, naka ukuthi ukuqondiswa kokunqunywa kokupakisha kufanele kumiswe ngu-90 ~ 180 °, futhi i-engeli efakiwe kufanele iphindwe kabili ngambili. Ungabi nokugqagqana okuningi ohlangothini olufanayo njengoba kukhonjisiwe kumfanekiso;
3. Emva kokufaka inani elifanele lokupakisha, buyisela okungu-5) ukupakisha indlala no-6) ukufakwa kwengcindezi yokupakisha ingcindezi. Lapho ufaka, naka ukuma kophawu lokupakisha kanye no-6 ~ 10mm ekujuleni kwekhava ye-valve (noma u-1.5 ~ ama-2 ubukhulu bokupakisha) njengereferensi yokuma (Njengoba kukhonjisiwe ngezansi).
4. Buyisela 1). Ukupakisha ukuminyaniswa kwenati, 2) Qinisa indawo yokufaka ibhawodi elihlangene ize ifinyelele kuma-20% wokucindezelwa kokupakisha.
5. Ngemuva kokuqeda lezi zinyathelo ezingenhla, yenza ukuhlolwa okuyinhloko ku-valve okushintshe ukupakisha ekusetshenzisweni okulandelayo ukuze ubone ukuthi kunesidingo yini ukwandisa ukulayishwa kwangaphambili kokupakisha.
Amazwi: Imiyalo yokuqinisa kabusha nokufaka kabusha ukupakisha ngaphansi kwengcindezi.
Imisebenzi elandelayo imisebenzi eyingozi. Sicela ungazami kancane uma zingadingeki. Sicela ulandele ngokuqinile lo mbhalo wokuqondisa phakathi nezinyathelo zokusebenza:
1. Opharetha kufanele abe nokuqonda okuthile kwemishini nama-valve. Ngaphezu kwamathuluzi wokukhanda adingekayo, opharetha kufanele afake amagilavu ​​okuvikela ukushisa, izivikelo zobuso nezigqoko zokuzivikela.
2. I-valve ivulwa ngokugcwele kuze kube yilapho uphawu lwaphezulu lwe-valve lusebenza ngokuphelele. Isisekelo sokwahlulela ukuthi indlela yokusebenza ye-valve ayisakwazi ukuphakamisa isiqu se-valve, futhi awukho umsindo ongajwayelekile kusiqu se-valve.
3. I-opharetha kufanele ibe sohlangothini lwendawo yokupakisha noma ezinye izikhundla ezingenakuboniswa. Akuvunyelwe nakancane ukubhekana nesimo sokupakisha. Lapho ukupakisha kudinga ukuqiniswa, sebenzisa isikrufu ukuqinisa 1) Ukupakisha i-compression nut, amazinyo ama-2 ~ 4, zombili izinhlangothi zomuthi wokuminyanisa wokupakisha Kudinga ukwenziwa, hhayi uhlangothi olulodwa nje.
4. Lapho ukupakisha kudinga ukushintshwa, sebenzisa isikrufu ukukhulula i-1) Ukupakisha ukuminyanisa kwenati, amazinyo ama-2 ~ 4, i-nut yokupakisha yokucinana ezinhlangothini zombili idinga ukwenziwa ngenye indlela. Ngalesi sikhathi, uma kunempendulo engajwayelekile kusuka kusiqu se-valve, yima ngokushesha bese usetha kabusha i-nut, qhubeka Sebenzisa indlela yokusebenza ye-valve ngokulandela inqubo esinyathelweni sesi-2, gcwalisa uphawu ku-valve stem kuze kube isebenza ngokuphelele, bese uqhubeka esikhundleni sokupakisha. Ukupakisha okufakelwe ngaphansi kwengcindezi akuvunyelwe ukuthi kufakwe okunye ngokuphelele ngaphandle kwezimo ezikhethekile. Ubungako obuthathelwayo kungu-1/3 wokupakisha okuphelele. Uma kungenakwenzeka ukwahlulela, amaphakethe amathathu aphezulu angashintshwa. Ngemuva kokuthi ukufakwa sekuqediwe, buyisela ukufakwa komkhono wokushicilela ongu-5 kanye nepuleti lokucindezela elingu-6. Lapho ufaka, naka isikhundla sophawu lokupakisha kanye no-6 ~ 10mm ekujuleni kwekhava ye-valve (noma u-1.5 ~ izikhathi ezi-2 ukushuba kokupakisha) njengesethenjwa sokuma. Buyisela 1). Ukupakisha ukuminyaniswa kwenati, 2) Qinisa indawo yokufaka ibhawodi elihlangene liye ku-25% wokucindezelwa okuphezulu kokupakisha. Uma kungekho ukuvuza ekupakisheni kwesiqu se-valve esingezansi, kuphelele. Uma kunokuvuza, landela izinqubo ezinyathelweni ze-2 ne-3 ukuze uqinise.
5. Zonke lezi zinyathelo zokusebenza ezingenhla ezokuphakama kwamavalvu okuphakamisa iziqu njengalezi: ukukhuphuka kwesivimbi sesango, ukukhuphuka kwe-stem stop valve, njll., Akusebenzi esihlahleni esimnyama nakumavalve wesiqu angaphakamisi afana nalawa: i-valve yesango elimnyama, isiqu stop valve, uvemvane valve, Ball valve nokunye.